Jereo izay azontsika jerena ao amin'ny tanànan'ny Skotlandia, Glasgow | Bezzia
Inona no ho hita ao Glasgow
Susana Garcia | 21/04/2021 10:00 | Lifestyle, Tsangatsangana
La ny tanànan'i Glasgow dia tanàna misy seranana izay manamorona ny Reniranon'i Clyde. Ity tanàna Scottish any amin'ny Lowlands ity dia matetika tsy toerana hitsidihana raha ampitahaina amin'i Edinburgh, fa manafina zavatra mahaliana ihany koa. Nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX ka hatramin'ny faha-XNUMX dia tanàna nanankarena sy indostrialy tokoa izy, noho izany dia nanana fitomboana lehibe. Androany isika dia mbola afaka mahita ny maritrano Victoria sy Zeorziana, ary koa ireo faritra maoderina.
Andao hojerentsika hoe inona ireo teboka mahaliana ao an-tanànan'i Glasgow, izay fitsidihana mahaliana ihany koa. Fitsidihana tsara izany raha any Edinburgh isika, satria tonga alohan'ny adiny iray. Ho hitantsika ny ivon-toerana manan-tantara sy ny faritra seranan-tsambo nohavaozina eo akaikin'ny renirano, ho fanampin'ny zavatra hafa.
1 Katedraly St Mungo
2 Museum an'i Kelvingrove
3 Zaridaina Botanika Glasgow
4 Necropolis any Glasgow
5 Ashton sy Hidden Lane
6 Afovoan-tanàna Glasgow
Katedraly St Mungo
Ity iray ity Katedraly dia iray amin'ireo tranobe tranainy indrindra ary tena fanehoana ny fomba Gothic any Ekosy. Katedraly izay natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary novaina tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Azonao atao ny mitsidika ny fasan'i Saint Mungo izay olo-masina mpiaro ny tanàna ary hita ao amin'ny vala tranainy tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Azonao atao ihany koa ny mankasitraka ireo varavarankely fitaratra miloko tsara tarehy, na dia misy aza izy ireo ary ny valindrihana tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Katedraly tena tsara sy iray amin'ireo fitsidihana tena ilaina ao an-tanànan'i Glasgow.
Museum an'i Kelvingrove
Eto amin'ity tanàna ity dia misy tranombakoka marobe, na dia io aza no tsy maintsy jerenao ary aza adino raha tsy manam-potoana be hahitana azy rehetra ianao. Voahodidina zaridaina tsara tarehy ity tranombakoka ity ary tsy vitan'ny hoe manintona ny manodidina azy io, satria manana asa mahaliana maro izy io. Afaka mahita ao amin'ny efitranony isika Boticelli's 'The Annunciation' or Dalí's 'Christ of Saint John of the Cross', ary koa ny sary hosodoko sasany nataon'i Van Gogh na Rembrandt.
Tsara tarehy ity Ny zaridaina botaniolo dia eo amin'ny faran'ny West End. Izy io dia zaridainam-panjakana lehibe iray izay tena tsara tarehy amin'ny vanim-potoana toy ny lohataona sy fararano. Ao amin'ity zaridaina ity no ahitantsika ny Kibble Palace, trano fandraisam-bahiny Victoria lehibe izay mendrika hitsidika azy. Ny toerana mety fakana sary tsara tarehy.
Necropolis any Glasgow
Manakaiky ny Katedraly St Mungo dia i Nizeria tsara tarehy Glasgow. Ao Edinburgh dia azonao atao ihany koa ny mankasitraka ireo fasana taloha mahafinaritra, izay tena manana hatsarana manokana. Ity fasana ity dia avy tamin'ny vanim-potoana Victorian, ka misy antsipiriany marobe izay hahagaga antsika. Afaka mandeha an-tongotra ianao ary mankafy ny antsipiriany rehetra ao amin'ny fasana ary miakatra ihany koa amin'ny katedraly mba hahitana azy avy any ambony.
Ashton sy Hidden Lane
Raha maheno zavatra momba ny lalana ianao, dia ety sy antitra ary cobbled ireo, izay ahitanao ny rivotra iainana tsara indrindra eto an-tanàna. Ka fitsidihana hafa indray Azo antoka fa te-hanao an'i Ashton sy Hidden Lane ianao. Ashton dia ao amin'ny distrikan'ny oniversite ary afaka mahita trano fisotroana sy trano fisakafoanana misy rivo-piainana mety hijanonana isika. Hidden dia mangina kokoa, miaraka amin'ny kafe sy fivarotana sasany izay hividianana zavatra mahaliana.
Ao afovoan-tanàna isika dia afaka mahita toerana mahaliana sasany, satria izy io dia tanàna ahitantsika kanto sy tarehy mahafinaritra. Kianja afovoany dia misy fahatsiarovana ady ny Kianja George. Ao amin'ny Buchanan Street no ahitantsika ny làlam-barotra be indrindra avy ao an-tanàna, miaraka amin'ireo zana-dalambe mahaliana na fampisehoana zavakanto an-tanàn-dehibe. Azontsika atao ihany koa ny mitsidika ny The Lighthouse, trano iray tena hafahafa ao Mackintosh izay foiben'ny gazety fa ankehitriny dia tranombakoka manana fidirana maimaim-poana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Lifestyle » Inona no ho hita ao Glasgow
Sarin'ny fampakaram-bady, ahoana no fomba hahitana tarehy tsara foana?
Inona no atao hoe fenugreek ary ampiasaina amin'ny inona izy io?